Pokémon GO wuxuu heli doonaa cusbooneysiin weyn si uu u keeno heerka heerka laga bilaabo 40 illaa 50 | Androidsis
Pokémon GO wuxuu heli doonaa cusbooneysiin weyn si uu uga keeno heerka heerka 40 ilaa 50
Pokémon GO wuxuu heli doonaa cusbooneysiin cusub dhowaan taas oo qaadan doonta xadka heerka 40 ilaa 50. Waxaana muuqata wax la yaab leh in sanadkaan xayiraadaha, ciyaarta Niantic Games ay awood u yeelatay inay gasho 1.000 milyan oo doolar oo dakhli ah 10-ka bilood ee sanadka ugu horeeya.
Waa maxay waxay muujineysaa xaaladda caafimaad ee weyn ee ah si loo siiyo nuxur cusub cusbooneysiin cusub oo ka dhigi doonta kuwa gaadhay heer xadka lagu soo rogay illaa hadda 40 aad u faraxsan.
para Cusbooneysiintan cusub waxaa la heli doonaa Nofeembar 30 taas oo ka koobnaan doonta kordhinta heerka ugu sarreeya ee laga helayo 40 illaa 50. Xaqiiqdii, Ciyaaraha Niantic waxay ku dhawaaqeen inay sidoo kale dib u habeyn ku sameynayaan nidaamka khibradaha si loo sii wanaajiyo.
Oo halkan ayaa laga soo saaray taas u gudub heerkaas 50, Marka laga reebo inuu u baahan yahay inuu helo qibrado badan oo waayo-aragnimo ah, ciyaaryahanka waa inuu la kulmaa caqabado qaarkood.
Mid baa isweydiin kara sababta Pokémon GO sanadkan u la kulmay filashooyinka dakhliga, waxaana badanaa sabab u ah tallaabooyinka loo qaaday kala fogaynta bulshada waxaa qoray COVID-19 Waxaa la kordhiyay gacan ka mid ah waxyaabaha walxaha laga heli karo gudaha PokéStops ama awooda kaqeybgalka Dagaalada Raid meel fog.
Cusboonaysiintaan cusub shay cusub oo loo yaqaan Candy XL ama Caramelo XL ayaa la soo bandhigi doonaa, Taasina waxay u oggolaaneysaa ciyaartoydu inay si joogto ah u kordhiyaan ugu badnaan dhibcaha dagaalkooda ama CP ee Pokémon. Ujeedada cad ee dhaqdhaqaaqan ayaa ah in la siiyo macaan dheeraad ah dagaalada u dhexeeya ciyaartoyda.
Y haddii aad si joogto ah u ciyaareyso Pokémon GO, U diyaari dhacdooyin taxane ah oo laga soo bandhigi doono cusbooneysiinta cusub si khibrad looga helo si dhakhso leh. Suurtagalnimada in xilliyada lagu soo bandhigo Pokémon GO saddexdii biloodba mar lama iska indhatirin sidoo kale; qaaciidada xukumaysa dhammaan ciyaaraha khadka tooska ah ee kumanaan ciyaartoy ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Pokémon GO wuxuu heli doonaa cusbooneysiin weyn si uu uga keeno heerka heerka 40 ilaa 50
'Sanduuqyada bililiqada' waxaa lagu dari doonaa Sharciga cusub ee Ciyaaraha ee Spain
Pixel Strike 3D waa cinwaan cusub oo Minecraft ku daraya Fortnite